﻿ नयाँ वर्षको अवसरमा नेपाल टेलिकमले ल्यायो आकर्षक अफर
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नयाँ वर्ष २०७८ को अवसरमा ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी विभिन्न प्याकेज सहितको स्प्रिङ अफर सार्वजनिक गरेको छ । सो अफर अन्तर्गतका सेवाहरु आजदेखि ९० दिनसम्म उपयोग गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ ।
यसअघि उपलब्ध विन्टर अफर अन्तर्गतका प्याकेजमा केही थप सुविधासहित स्प्रिङ अफर उपलब्ध गराइएको टेलिकमको भनाइ छ ।
यस्तै जम्मा रु. १२५ मा सबै नेटवर्कमा १ जिबी र फोरजी नेटवर्कमा थप ३ जिबी गरी जम्मा ४ जिबी डाटा अफर ल्याइएको छ । ५ दिन प्रयोग गर्न सकिने यस अफरमा १०० मिनेट कुराकानी समेत गर्न सकिन्छ । यो अफर पनि २४सै घण्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
साथै, २ घण्टासम्म असीमित डाटा प्रयोग गर्न सकिने गरी रु। ३० को अर्को अफर पनि थप गरिएको छ । यो अफर २४ सै घण्टा कुनैपनि समयमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
जिएसएम मोबाइल ग्राहकहरुका लागि जम्मा रु. २८० मा २८ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने ४ जिबी डाटा प्याक अफर ल्याइएको छ । यो प्याक अन्तर्गत लिइएको ३ जिबी डाटा जुनसुकै समयमा र नेटवर्कमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी डाटा प्याक अन्तर्गत नै जम्मा रु.९५ मा १.५ जिबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने अफर पनि उपलब्ध गराइएको छ । यो प्याक ७ दिनसम्म २४ सै घण्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सिडिएमए मोबाइल र वाइम्याक्स सेवाका ग्राहकहरू कम्पनीकै अन्य सेवामा रुपान्तरण हुने क्रम जारी रहेकोले ती सेवाका ग्राहकहरूका लागि विन्टर अफरका रुपमा उपलब्ध विभिन्न अफर र सुविधाहरुमध्ये सीमित अफरहरुलाई मात्र निरन्तरता दिइएको टेलिकमको भनाइ छ ।
विभिन्न प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले *1415# डायल गर्नुपर्ने छ ।
बिल गेट्सले पत्नीसँग सम्बन्ध बिच्छेद गर्दै
ह्वाट्सएपमा २४ घण्टामा मेसेज आफैं डिलिट हुने